Annaga nagu saabsan - Hangzhou Sihope Technology Co., Ltd.
Hangzhou Sihope Technology Co., Ltd. waa shirkad heer qaran ah oo tignoolajiyadeed sare leh, oo ku taal Fuyang National High-tech Park, Hangzhou.
In 1994 sano, shirkadda our waxaa la dhigay in ka badan 40,000 mitir oo laba jibbaaran warshad, taas oo ku takhasusay nidaamka oxygen shaandho kelli, mishiinka nitrogen, nidaamka sahayda dhexe ee oxygen, nidaamka nuugista dhexe, unug kombaresarada hawada, jeermiska hawada, cadaadisay qalabka hawada sifaynta, modular ozone. matoor. Tignoolajiyada Sihope waxa ay leedahay 76 teknooloji oo patented, 12 shati-hal-abuur qaran (shirkaddu waa shirkad tijaabo ah oo gobolka ah), laba badeeco ayaa lagu daray Qorshaha Tooshka Qaranka; saddex taxane ayaa lagu qiimeeyay inay yihiin wax soo saarka teknoolojiyadda sare ee gobolka. Shirkadda Our ma aha oo kaliya ayaa maray YY / T 0287, ISO9000, 13485 nidaamka tayada, laakiin sidoo kale abaal-marin wax soo saarka ammaanka heerka heerka 3 shirkadaha, wax soo saarka Qaranka iyo adeegga tayada bandhiga, tayada qaranka ugu wanaagsan tayada hufnaanta shirkadaha bandhig. "Xarunta Cilmi-baarista Tiknoolajiyada Cadaadiska Swing" waxaa la aasaasay iyada oo lala kaashanayo tiro machadyo cilmi-baaris cilmiyeed.
Ilaa hadda, waxaa jira in ka badan 1000 shirkadood iyo machadyo caafimaad oo la doortay alaabtayada. Si loo hubiyo danaha macaamiisha, shirkadeena waxay dejisay nidaam maarayn tayo fiican leh, oo leh ISO9001 nidaamka maaraynta tayada tayada iyo shahaado nidaamka maaraynta tayada agabka caafimaadka iyo nidaamka dabagalka iyo kormeerka adeegga iibka kadib, la tashi waqti ah oo lala yeesho macaamiisha si wax ku ool ah loo hubiyo hawlgalka caadiga ah ee qalabka. Intaa waxaa dheer, alaabta waxaa loo dhoofiyaa Korea, Sudan, Iraq, Bangladesh, Vietnam, Iran, Kazakhstan, Russia iyo dalalka kale iyo gobollada. Sihope wuxuu joogi doonaa heerka ugu sarreeya waxay kuxirantahay hal-abuurnimo joogto ah, naqshad xirfadeed iyo faa'iidooyinka wax soo saarka.
Shirkaddu waxay si dhow ula shaqeysaa naqshadeynta xirfadlayaasha qaranka iyo machadyada cilmi-baarista, hal-abuurnimada tignoolajiyada joogtada ah, Hagaajinta tayada badeecada iyo tayada. " daacadnimo, hufnaan, xirfad-yaqaannimo, hal-abuurnimo" ayaa ah fikraddayada asaasiga ah ee ujeeddadeedu tahay in aan macaamiisha siino tayo wanaagsan, la isku halleyn karo, wax soo saar badan oo tamar-badbaadin ah oo aan abuurno calaamad heersare ah oo heerka koowaad ah.
Alaabta Sihope waa ka badbaado badan, ku habboon, tamar badan, caqli badan!
Ruuxu wuxuu horseedaa safar dheer!